Ny dikan'ny anaran'i Arin. Ny misterin'i Arina
Rehefa mandre ny anaran'i Arin ianao, dia maneho vehivavy mahatoky, mahafinaritra ary mahaleo tena ianao. Tena marina izany. Arins, matetika, dia mampihetsika fotsiny ny fiadanana anatiny. Tsy mahagaga raha nadika avy amin'ny teny grika ny anaran'i Arina ho "fiadanana", "fiadanana".
Ny niandohan'ny anarana Arina:
Heverina fa ny anaran'i Arina amin'ny kolotsaina miteny Rosiana dia avy amin'ny fiteny Rosiana fahiny Rosiana ny anaran'i Irina. Izany dia vokatry ny fahazarana manokana amin'ny famoahana taratasy avy amin'ny tantsaha. Ao amin'ny fiarahamonina manana tombontsoa, ​​nomena anarana tsara ilay anarana, ka tsy niantso ny ankizy i Arin.
Misy koa ny dika faharoa, ny fiandohan'ny anarana, izay milaza fa ny anaran'i Arina dia endriky ny anarana slavonan'i Yarin, izay nitsangana tamin'ny anaran'ilay andriamanitra Slavy lehibe - Yarila.
Ny dikan-teny fahatelo dia milaza fa ny anaran'i Arina dia endriky ny lehilahy jiosy atao hoe Aaron, izay midika hoe "tendrombohitra", "mpampianatra", "avo", "nohazavaina".
Araka ny dikan-teny fahaefatra, io no anaran'ilay andriamanibavy Thraciana amin'ny tara-masoandro.
Ny toetra sy ny fandikana ny anaran'i Arin:
Na dia hatramin'ny fahazazany aza, ny ankamaroan'ny fehezan-teny Arinina dia "izaho mihitsy!". Miezaka ny handray fanapahan-kevitra tsy miankina izy. Alohan'ny hanaovana izany asa izany, i Rina imbetsaka dia hieritreritra izany ary handanja izany. Mihalehibe ilay tovovavy kely sady malemy, "ao an-tsaiko". Ny tovovavy manana izany anarana izany dia tahaka ny rainy, fa ny toetrany dia raisina avy amin'ny reniny. Manana fomba fijery tsara izy, mahatsiaro ny vaovao rehetra, raha ny marina, avy hatrany.
Any am-pianarana izy dia mahatsapa mora foana ny tanjony, ny ankizivavy dia tia mianatra. Arina dia olona mamorona ary manana tsiro mahafinaritra. Mankasitraka ny fientanam-pony izy amin'ny fanaovana sary, miloko sy kodiarana. Tiany ny milalao fanatanjahan-tena. Amin'ny ankapobeny, ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena dia i Arina. Tena tiany ilay tovovavy, ao anatin'ny faritry ny namany sy ny ankizivavy, ary ny ankizilahy. Ankoatra ny fanjifana sy fanatanjahantena, te-hianatra fiteny vahiny maro i Rina, tia maka sary. Amin'ny hoavy, afaka mahazo fahaizana manokana maro samihafa izy.
Ny ankizivavy, miaraka amin'io anarana io, dia tsy hamela na iza na iza hametraka ny heviny. Ao anatin'ny fifandonana sy ny horohoron-tany dia ahitana fifehezan-tena tena tsara. Fantany foana izay ilainy. Mametraka tanjona iray, manomana tsara ny zava-bitany. Ao am-piasana, Arinu, matetika, mankasitraka mpiara-miasa sy mpiara-miasa. Ny maha-zokiolona azy, raha vao teraka dia mahatsapa ny fihetseham-pon'ilay mpiara-miasa izy, noho izany dia afaka mahita fiteny iombonana ny rehetra. Arina - ny workaholic, izay miezaka ny mitondra asa hatramin'ny farany, dia mifantoka foana amin'ny raharaha. Raha ankalazaina matetika izy io, dia ho avo kokoa ny kalitaon'ny asa.
Ny lohan'i Arina dia tsara, - hanaja azy ny masoivohony ary hihaino azy sy ny faniriany. Ankoatra izany, olona tena marina io. Tsy hanafika na oviana na oviana amin'ny mpiampanga ampahibemaso izy, ny fanehoan-kevitra rehetra dia aleony miresaka momba ny tete-a-tete. Afaka manao asa mahomby amin'ny asa ianao amin'ny maha-mpanamboatra, mozika, mpanakanto, lamaody.
Ao anatin'ny fifandraisana amin'ny lehilahy, Arina dia tena misalasala. Matetika izy dia lavo amin'ny fitiavana, saingy tsy afaka maneho tanteraka ny fihetseham-pony izy. Matetika izy no tsy mahatsapa izany. Nalaina tamin'ny lehilahy iray, tsy namoy ny fahaiza-misaina tsara.
Arina, matetika, manana mpankafy maro. Hanambady aloha. Amin'ny fanambadiana dia maneho ny tenany ho mpirahalahy mahafinaritra, tia mandray vahiny sy tia mandray vahiny, ary vady vita fanoloran-tena. Tiany ny manadio sy mamorona koziness ao an-tranony. Ny lehilahy dia mangataka fahitsiana, dia tena saro-piaro. Ny olom-boafidin'i Arina dia tokony ho lasa mpitarika ao amin'ny fianakaviana. Renim-pianakaviana be fitiavana izy, ho an'ny fahasalaman'ny zanany, vonona amin'ny zavatra maro.
Zavatra mahaliana momba ny anaran'i Arina
Arin, teraka tamin'ny ririnina, dia manana fifandraisana sarotra amin'ny ray aman-dreniny.
Ao amin'ny Orthodoxy, marobe ny olo-malaza fantatra amin'ny anarana Arina. Ity no vadin'i Md George - Arina marina, ilay mpanjakavavy mahatoky ao Arina ary ny Monk Arina avy any Capadocia.
Ny fifehezana amin'ny anaran'i Arin, toa an'i Ira, Rina, Rena, dia nampiasaina ho anarana mahaleo tena.
Tany Rosia, ny anarana Arina dia nahazo fitiavana malaza, noho i Arina Rodionovna - mpitsabo mpananihany poeta Pushkin.
Ny anaran'i Arina amin'ny fiteny samihafa:
Ny anaran'i Arina amin'ny teny anglisy: Irene (Irene) / li>
Anarana amin'ny teny sinoa: 阿林娜 (Alinna)
Anarana amin'ny teny japoney: ア リ ナ (Arina)
Ny anaran'i Arina amin'ny teny Espaniola: Irene (Irene), Irenita (Irenita)
Ny anaran'i Arina amin'ny teny alemana: Irene (Irena, Irene)
Anarana amin'ny teny poloney: Irena (Irena), Irenka (Irene), Ircia (Ircia)
Ny anaran'i Arina amin'ny teny Okrainiana: Irena, Yarina
Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irinka, Irinka, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Irina, Rina, Irina, Aryusha, Ira, Arisha, Rinka, Arina, Arishka
Ny lokon'ny anarana Arina : manga manga
Ny voninkazo Arina :: lily eny amin'ny lemaka
Nicky ho an'ny anarana Arina: ARINA, Rina, Smile, Renee, Rodionovna, Ara, Irene, Arch, Arka, Yarilo, Masoandro, Clear Sunny
Nampahafantarin'i Ilon Mask fa hampiteraka ny Ady Lehibe Faharoa!
Iza ny anaran'i Igor?
10 saro-kenatra izay miandry ny fandriampahalemana amin'ny taona 2018
Ny fanorenana manda amin'ny tànana manokana - hevitra
Inona no tokony hanamboarana ny henan'omby?
Ny sandan'ny laharana 444
Fivoarana vaovao amin'ny alika: fampakaram-bady mariazy miaraka amin'ny biby fiompy efatra
Ny ankizy dia manana lahateny - inona no azoko atao?
Echinococcosis - soritr'aretina